XOG: Shan Xaqiiqo oo ku saabsan Ciidamada Dowladda Somaliya tababarka ugu dirtay dalka Eritrea | Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis.
Ciidamada dowladda Soomaaliya tababarka ugu dirtay dalka Eritrea waxay arrintooda soo bilaabatay sanadkii 2019, waxayna ahayd mid qarsoodi ah oo aan la mid ahayn, dhammaan ciidamadii kale ee tababarrada loogu diro dalal dibadda.
Waxaa marba soo baxayey warar ku saabsan Ciidamadan, ujeedkooda iyo waxa laga rabo inay qabtaan, waxaana markii muddo la joogana warbaahinta imaanayey hooyooyin iyo waalidiin ay ka maqan yihiin wiilal loo qaaday tababar ciidan oo madaxda dowladda ka codsanaya iney meel ugu sheegaan.
Marka laga reebo in siyaasiyiin iyo xildhibaanno mucaarad ah ma jirin cid daba gashay arrintan, marka kaliya ee Baarlamaanku arrintan soo qaaday waxay ahayd Disember 2019 markii uu hortegay Taliyaha Ciidamada Xoogga Dalka Odowaa Yuusuf oo sheegay inaysan ciidamadaasi ka war heyn, ciidamo ka tirsan Xoogga Dalkana aysan ahayn.
Ka sokow dooda ka taagan in ciidamada dowladda Soomaaliya u dirtay Eritrea ay ka qeyb galeen dagaalkii Gobolka Tigray, iyo in qaar ka mida dhinteen, haddana waxaa sii dheeraaday waqtiga ay maqan yihiin ciidamadaasi oo marar kala duwan la qaaday, taasoo sii kordhineysa dareenka waalidiinta ay askartaasi ka maqan tahay.
Xaqiiqooyinka laga hayo ciidamadan sida qarsoodiga ah loo maamulayo, waxaan kusoo koobi karnaa shantan qodob:
1– YAA QORSHEEYAY, YAASE KA MAS’UUL AH..?
Qoriska, Qorsheynta iyo maamulka ciidamada tababarka loogu diray dalka Eritrea waxaa gacanta ku hayey agaasimaha Hay’adda NISA Fahad Yaasiin Xaaji Daahir, laakiin waxay si toos ah u hoos tagaan madaxweyne Maxamed C/llaahi Farmaajo.
2- WAA CIIDAMO NOOCEE AH..?
Ciidamadan kaliya waxaa la ogyahay inay gacanta ku heysay Hay’adda NISA, laakiin ilaa iyo iminka ma cadda nooca ay yihiin, iyadoo aysan suuragal ahayn inay NISA ka mid noqdaan, ayaa warar kala duwan sheegeen inay yihiin ciidamo gata oo NISA hoos taga.
Waxaa hore u soo baxay warar sheegaya inaysan ahayn ciidamo ka tirsan talisyada kale, sida Booliska, Milateriga iyo Asluubta. Taliyaha ciidamada Milateriga ayaa beeniyay inay ka tirsan yihiin Xoogga dalka.
3- WAA IMISA TIRADOODA, SIDEENA LOO SOO XULAY..?
Tirada ciidamadan oo xilliyo kala duwan loo qaaday dalka Eritrea waxaa lagu qiyaasaa 3000 ilaa 4000 askari, waxaana laga soo xulay beelo iyo degaanada kala duwan ee Soomaaliya oo chan.
Waxaa ciidamadan suuqa loo geliyey warar been ah sida in la geynayo dalka Qatar oo ay shaqo fiican iyo mushaar badan ka heli doonaan, taasoo keentay in dhalinyaro badan oo qaarkood wax bartay ay qortaan ciidamadan, balse waxay ku dambeeyeen dalka Eritrea. Xildhibaanno, odayaal iyo mas’uuliyiin kala duwan ayaa qeyb ka ahaa qorista ciidamadan.
4- MAXAA KEENAY IN ERITREA LA GEEYO..?
Ciidamadan ayaa markii hore loogu talogalay in lagu tababarro dalka Suudaan, iyadoo kharashka bixineyso dalka Qatar, balse xaaladii Suudaan ka jirtay darteed ayaa loo wareejiyay dalka Eritrea oo madaxweyne Maxamed C/llaahi Farmaajo saaxiib la yahay madaxweyne Isaias Afwerki, isla markaana isbaheysi leeyihiin.
5- MAXAA LOOGU TALOGALAY INAY QABTAAN..?
Ciidamada dowladda Soomaaliya tababarka ugu dirtay Dalka Eritrea waxay warar kala duwan sheegeen in loogu talogalay Amniga dalka, gaar ahaan gobollo gaara, laakiin siyaasiyiin mucaarad ah ayaa ku doodaya inuu Madaxweyne Farmaajo doonayo inuu shaqooyin gaara u dirsado.
Dhibaatada ugu weyn ee hadda taagan ayaa ah in ciidamadan oo qarsoodi ahaan howshooda loo waday muddo ku dhow 2 sanadood hadda dood weyni ka taagan tahay, arrintoodana dibadda u soo baxday, kadib markii waqtiga ay joogaan dalka Eritrea uu sii dheeraaday, waxayna Madaxweyne Farmaajo iyo Agaasimaha NISA ku qasban yihiin inay soo bandhigaan mid ka mida qorsheyaashoodii qarsoodiga ahaa.
Previous articleAlshabaab oo War kasoo saartay Qarixii lagu dilay Mas’uuliyiinta Degaanka Garasbaalley ee Muqdisho
Next articleGuddoomiyaha Mudug oo u jawaabay Afhayeenka Alshabaab: “Ninkii soo dila Cali Dheere waxaan siinayaa…”
Farmaajo oo ka hadlay Heshiiskii Midowga Musharixiinta iyo xukuumadda (Bogaadin uu diray)
Rooble oo shaaciyey kaalintii uu Farmaajo ka qaatay Heshiiskii uu la galay Midowga Musharixiinta
Akhriso: Heshiis ka kooban Lix Qodob oo ay gaareen RW Rooble iyo Midowga Musharixiinta
Xasan Kheyre oo ku dhawaaqay in dib loo dhigay Bannaanbixii Berri ka dhici lahaa Muqdisho
Wararkii ugu danbeeyay ee Shirka u socda Musharixiinta iyo RW Rooble (Qodobka ugu adag ee…)
AKHRISO: Saddexda Tallo ee hortaalla Madaxweyne Farmaajo -Tee ayuu ku bixi doonnaa..?-
XOG: Beesha Caalamka oo faragelin ku sameysay Qorshihii Farmaajo ee Baarlamaanka iyo muddo Kordhintii laga…
XOG: Qodobka ugu adag ee horyaalla kulanka Madaxweyne Farmaajo iyo Wakiilada Beesha caalamka
XOG: Xaqiiqada magacaabidda Guddiyada Doorashada Puntland iyo Jubbaland (Damaanadda Beesha Caalamka)
Gudoomiyaha G/Banaadir oo shaqadii ka joojiyey Waaxda Dhulka, kadib Fadeexad kusoo baxday Madaxda…